बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिना’की गर्भव’ती हुँ’दा दाइजाे’काे नाउँ’मा ह’ त्या ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिना’की गर्भव’ती हुँ’दा दाइजाे’काे नाउँ’मा ह’ त्या !
बुवाआमाले जग्गा बेचेर बिहे गरिदिए, ८ महिना’की गर्भव’ती हुँ’दा दाइजाे’काे नाउँ’मा ह’ त्या !
दाइजो’को भुंग्रो’मा परेकी २३ वर्षीया रेखादेवी ठाकुर अघिल्लो फागुनमा माइत गएकी थिइन्। बुवाआमाले जग्गा बेचेर कसिदिएको लगनगाँठोकै सम्मान खातिर रेखादेवी मन नलाग्दा–नलाग्दै ईशनाथ–५ लक्ष्मीनियास्थित घर फर्किइन्। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
‘त्यसपछि बहिनी रेखादेवी फर्केर आइनन्’, उनका दाइ रोशन ठाकुरले भा’व’वि’ह्वल हुँ’दै सम्झिए, ‘आयो त केवल मृ’त्यु’को ख’बर।’
आठ महिनाकी गर्भवती रेखादेवी’को मृ’त्यु’को ख’बर वैशाख १६ गते साँझ मो’तीपुरभरि फैलियो। रेखादेवीको माइती पक्ष दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको लक्ष्मीनिया पुगे। तर, उनका पति सञ्जय ठाकुर त्यहाँ देखिएनन्।
गाउँलेहरू सञ्जय फरार भएको बताइरहेका थिए। घर प्रहरी घेरामा थियो। सञ्जयका काका देवेन्द्र ठाकुर (तत्कालीन वडाध्यक्ष)ले ‘पावर’ लगाए। माइती पक्षलाई गेटमै रोकियो। राति ८ बजे मात्र शव रहेको कोठा’मा जा’न दि’इयो। प्रहरी मुचुल्कामा सही गर्न भनियो।
सञ्जयका बुवा नागेन्द्रले बिजुलीको मेन स्विच अफ गरिदिए। ‘मोबाइलको लाइट बालेर बहिनी’को श’व हे’र्‍यौं। गाला’मा हात’को डाम थियो, श’रीरभ’रि नी’लडा’म’, रोशनले भने, ‘कपा’ल लुछिए’को थि’यो। अनुहार र घाँ’टी वरपर रगत’का टाटा थि’ए। अनुहार को’तरिए’को थि’यो अनि खुट्टा पनि अ’स्वाभा’विक बां’गा दे’खिन्थे।’
उनका अनुसार कोठामा फुटेका चुरा र सामान यत्रतत्र छरिएका थिए। प्रहरी तिनै चुरा टिप्दै थिए। रेखादेवी’को श’व ओछ्यान’मा थि’यो। एउटा सल दुई टु’क्रा पा’रेर छोपिए’को थि’यो। रेखाका ससुरा’लाई उ’द्धृत गर्दै रोशन’ले भने, ‘यही स’ल’मा झु’न्डि’एर म’रे’की हो।’ तर, न झु’न्डि’ए’को अ’व’स्था’मा श’व थि’यो न त कु’नै फोटो देखाइयो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
अचानक के भयो कल्पना दाहाललाई ? डाक्टरले दिए यस्तो सुझाव
ओलीको गृह जिल्ला झापामा मंसिरदेखी पाईपबाट घरघरमा ग्यास
ट्रक ड्राइभरसँगअफयेर : १८ वर्षकी सरिताको बिचल्ली..,गर्भवती बनाएर भागेपछि…